Tag: waxyaabaha laga kooban yahay | Martech Zone
Tag: waxyaabaha laga kooban yahay
Cidina ma ogaan karin saameynta apocalyptic ee COVID-19 ay ku yeelan doonto nolol maalmeedkeena iyo dhaqaalaha iyo gaar ahaan tafaariiqda iyadoo la xirayo dukaamo badan oo waaweyn oo hareeraha waddooyinka ah. Waxaa la sameeyay sumado, dukaamo, iyo macaamiisha dhammaantood waxay dib uga fikiraan mustaqbalka tafaariiqda. Mashiinka Qiyaasta Quruxda Mashiinka Quruxda Qiyaasta BM (BME) wuxuu xal u yahay tafaariiqleyda gaarka u ah qurxinta, e-tailers, dukaamada waaweyn, timo jarayaasha, iyo noocyada. BME waa injineeriyad shaqsiyeed shaqsiyeed ku saleysan AI-calaamadeysan oo cusub oo saadaalineysa shaqsiyadna u gaar ah sheyga
2018 waxay arkeen qiyaastii 80% ee suuqleyda inay u adeegsadaan waxyaabo muuqaal ah istiraatiijiyadooda warbaahinta bulshada. Sidoo kale, adeegsiga fiidiyowyada ayaa ku soo kordhay ku dhowaad 57% intii u dhaxeysay 2017 iyo 2018. Waxaan hadda galnay xilli ay isticmaaleyaashu rabaan nuxur rafcaan leh, oo ay si deg deg ah u doonayaan. Ka sokoow inaad suurtogal ka dhigeyso, halkan waa sababta ay tahay inaad u isticmaasho waxyaabaha muuqaalka leh: Fudud in lala wadaago Fudud si loo xasuusto Madadaalo iyo kaqeyb qaadasho Sidaas ayey ku cadahay inaad ubaahantahay inaad sare uqaado ciyaarta suuqgeynta muuqaalka ah.
3 Hababka Dejinta Mawduuca-Waqtiga-Dheer si Loo Kordhiyo Ka Qeybgalka
Khamiis, Agoosto 11, 2016 Sabti, Febraayo 13, 2021 Douglas Karr
Markay dadku ka fekeraan shakhsiyaynta shakhsi ahaaneed, waxay ka fikiraan xogta shakhsi ahaaneed ee lagu daro macnaha fariinta emaylka. Maahan kaliya qofka rajadaada ama macmiilkaagu yahay, sidoo kale wuxuu ku saabsan yahay halka ay joogaan. Dejintu waa fursad weyn oo lagu riixo iibka. Xaqiiqdii, 50% macaamiisha ka raadsata xaafaddooda taleefannadooda casriga ah waxay booqdaan dukaan maalin gudahood ah, iyadoo 18% ay horseed u tahay iibsi Sida ku cad shaxanka Microsoft iyo VMob
Talaado, Agoosto 25, 2015 Axad, Agoosto 30, 2015 Jenn Lisak Golding
Suuq galiyeyaal ahaan, waxaan had iyo jeer isku dayeynaa inaan ururinno sirdoon kusaabsan dhaqanka macaamiisheena. Hadday ahaan laheyd falanqaynta Google Analytics ama fiirinta qaababka beddelka, wali waqti badan ayey nagu qaadataa inaan ku dhex marno warbixinnadan isla markaana aan xiriir toos ah la yeelano aragtida waxqabadka leh. Waxaan dhowaan ka bartay Boomtrain iyada oo loo marayo LinkedIn, waana iga dhigtay xiisahayga. Boomtrain wuxuu ka caawiyaa sumadda inay si wanaagsan ula xiriiraan adeegsadayaashooda iyagoo u soo gudbinaya 1: 1 waaya-aragnimo shaqsiyeed oo kaxeynaya hawlgal qoto dheer, haynta weyn,